चिन्तन चौतारी: यसपालिको दशैं
दशैको उपलक्ष्यमा वेइफ्याङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत ८औ र ९औ ब्याचले 'दशै भलिबल रनिङ् शिल्ड' को आयोजना गरेका थिए । ५औ, ६औ, ७औ, ८औ, ९औ र १०औ ब्याचका खेलाडिहरुको सहभागिता थियो । खेल २३, २४ र २५ तारिखका तीन दिन लगाएर खेलाइएको थियो । फाईनल खेल ५औ ब्याच र ६औ ब्याचका बिच २५ तारिखका दिन ४:३० बजे तय गरिएको थियो । अतिथिका रुपमा फोरेइन अफैर्सका प्रेसिडेन्ट प्रो लिउ लाई बोलाइएको भए पनि उनको कार्य ब्यस्तताले गर्दा फोरेइन अफैर्सका मिस्टर म्यात , सिनियर ट्युटर ज्हाङ, जुनियर ट्युटर को उपस्थिती थियो । खेल अती नै प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक भएको थियो । खेलको पहिलो सेट ५औ ब्याचले जितेर हाम्रो ६औ ब्याच माथि नराम्रो दवाव पार्न सफल भएको थियो । तर त्यसपछिका लगातार तीन सेट जितेर हामी बिजयी भयौ । खेल हेर्न ओभर्सिज मात्र नभएर चाइनिज विद्यार्थीहरु पनि झुम्मिएका थिए । आयोजकका तर्फबाट केशब धामीले प्रथम र द्वितिय हुने खेलाडिहरुलाई अबिरको टिका लगाएर बधाई दिए । पुरुस्कार र प्रमाण-पत्र अतिथिहरुबाट बितरण गरिसके पछी मिस्टर म्यातले अबका दिनमा प्रोग्राम गर्नु अगावै अफिसमा जानकारी दिन र सके जतिको सहयोग गर्न आफु तयार रहेको बताए । एकछिन रमाइलो फोटोसेशन चल्यो । विनर टिमको बिरुद्ध मिक्स टिम भिडाएर रमाइलो गर्ने योजना भने समय अभावले पुरा हुन सकेन । अर्को दिन खशी काटेर दशै भोज मनाउने कार्यक्रम थियो ।
खशी कात्न धामी सर र सन्जित शाह खत्नु भयो । बिभिन्न परीकार बनाउन राजन लुइतेल सरले निकै मेहिनेत गर्नु भयो । साँझ ८:३० बजेबाट भोज शुरु भयो । जित्ने टिम क्याप्टेनको हैसियतमा मलाई शुरुमै अगाडि बोलाइयो । सबैको अगाडि बोल्नु पर्ला भन्ने अलिकती सम्म पनि सोचेको थिएन । एक्कासी बोल्नु पर्दा मनमा के बोलम् के बोलम् भएर आयो तर अली संयमित भएर आफुलाई लागेका केही कुराहरु राखें । जसको सारांश यस्तो थियो ।
“सर्ब प्रथम त दशैको अबसरमा खेलको आयोजना गर्ने ८औ र ९औ ब्याचका साथीहरु र मलाई यहाँ आफ्नो २/४ कुरा राख्न मौका दिने केशब धामी जी लाई धन्यवाद ।
मेरो अगाडि सम्पूर्ण सिनियर र जुनियर साथीहरुलाई देखेर म निकै खुशी छु । हामी नेपालको बिभिन्न ठाउँबाट आएको भए पनि यहाँ एउटै परिवार झै भएर दशै मनाउन पाउदा शायद हामी आफ्नो घरबाट धेरै टाढा छैनौ भन्ने महशुस हामी सबैले गरिरहेको नै हौला । हामीले खेल खेल्यौ, कसैले जित्यौ कसैले हार्यौ भन्ने भावना कसैले पनि मनमा राख्नु हुँदैन । खेललाई हामीले सबै साथीभाइ एकजुट भएर दशै रमाइलो गरी मनाउने बहनाको रुपमा मात्र बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य त सबैले एक आपसमा गफ गर्दै नजिक बनौ, मनोरन्जन गरौं, चिन्जान नभएकाहरुले चिन्जान गरौं, चिन्जान भएकाहरुले अझै बदी आत्मियता बदाउ भन्ने नै हो । हामीले सिनियर र जुनियरका बिच ठुलो ग्याप देख्यौ र भोग्यौ तसर्थ त्यो हाम्रो पालादेखी नै हतेर जावोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । यस अघी हामीले 'द रेड कोङ्ची भलिबल प्रतियोगिता' पनि सम्पन्न गर्यौ जसको मुल उद्देश्य पनि यही नै थियो ।
यसपालिको कार्यक्रम एकदम सफल भएको ठान्छु । कार्यक्रम सफल बनाउन कति अप्ठ्यारो पर्‍यो, कति परिश्रम गर्नु पर्‍यो भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले भबिश्यमा पनि निरन्तरता पाइरहनु पर्छ । यस खेलको आयोजना गरेर आज टुंगिएको छैन, यसले एउटा परम्पराको बिकास गराएको छ । सबैले यसबाट सिक्दै र गर्दै जानुपर्छ । सकेसम्म परिमार्जित र परिस्क्रित गर्दै लानुपर्छ । आजको दिन हाम्रो जीवनमा एक अबिस्मरनीय क्षण बनेर हाम्रो मानसपातलमा रहिरहनेछ । यस प्रतियोगितामा एउटा कुराले अत्ती नै गर्ब महशुस गरायो, पुरुषको भलिबल टिममा एकजना मात्र केटी (संगिता) पनि समाबेश भएर प्रतिस्पर्धा गर्नु चानचुने काम पक्कै पनि होइन । चुलो चौकोमा सीमित हाम्रा नेपाली दिदिबहिनीहरु पनि चेतनाका साथ चौघेरालाई तोडेर अगाडि बद्नु अत्ती नै प्रसंसनीय कुरा हो । उनको यो साहसको हामीले कदर गर्नै पर्छ ।
अनी अर्को कुरा मैले प्रस्तावको रुपमा के भन्न चाहन्छु भने, हामी जत्ती पनि ओभर्सिज विद्यार्थीहरु छौ, हामीले एउटा अप्लिकेसन अफिसलाई बुझाऔ । प्रत्येक सेम्स्टेरको शुरुवातमा अफिसले हामीलाई केही खेलकुदका सामाग्री उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । चाइनिज स्टुडेन्टसलाई एक एक वटा भलिबल वा बास्केटबल दिन सक्छ भने हामीलाई एक दुई वटा बल कसरी दिन सक्दैन ? यसमा अफिसलाई सहमत गराउन नसकिएला र !? हाम्रो त अब जाने दिन पनि नजिक नजिक आइसकेको छ तर हाम्रो पछाडिका अरु ब्याचले हामीले जस्तै बल किन्ने बेलामा सधैं पैसा उठाउदै हिंड्न नपरोस ।
अन्तमा, यसरी सबै सँगै मिलेर रमाइलो गरेको, साथै बसेर खाएको अन्तिम दिन नभैदियोस । बिजया दशमीको यस् पावन अबसरमा सबै साथीहरुलाई दुर्गा माताले सुख शान्ती प्रदान गरुन् । जीवनमा आइपर्ने अनेक बाधा अबरोधहरु छिचोल्न सफल पारुन् । जिन्दगीका अध्यारा पाटाहरुलाई बिर्सेंर उज्यालो तिर लम्केका पाइलाहरु नथाकेर बदिरहुन् । यही कामना सहित यस खेललाई आयोजना गर्ने देखी सफल पार्न मुख्य भूमिका खेल्ने केशब धामी सर र सबैका लागि मिठो खानेकुरा तयार पार्ने राजन लुईटेल सर लाई बिशेष धन्यवाद दिदै बिदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद ।”
मेरो मन्तब्य लगत्तै भोज शुरु भयो । खाने र पिउने काम सँग सँगै मनोरन्जन गर्ने काम पनि चलिरह्यो । सबैले आ-आफ्नो पुरा परिचय र आफ्नो छोटो ब्याक ग्राउन्ड बताउने कुरा राखें । रमाइलोको लागि सबैले एक एक वटा केही भन्न वा गर्न पनि मन्जुरी भयो । सबैको सहमति भए पछी त्यो क्रम चल्यो । सबैले पालै पालो दशैको शुभकामना पनि बाड्यौ । सबैको अनुहारमा भिन्नै चमक देखिन्थ्यो । सबैले सके जत्तिको रमाइलो गर्यौ । ११:३० बजे तिर पार्टी सकियो। टिकाको दिन फेरी यही भेला भएर नाचगान गरी रमाइलो गर्ने वाचाका साथ हामी छुट्टीयौ ।
टिकाको दिन निकै रमाइलो गरी नाचगान भयो, मैले पनि केही बेर रमाइलो मानी मानी हेरें । साँझ ८ बजेतिर शुरु भएको रमझम १०:३० सम्म चलि नै रह्यो । मलाई सबैले थुप्रै पटक नाच्न आग्रह गर्न थाले । नाच्नै पर्छ भनेर तान्न नै थालेपछि राजन सरलाई मैले मेरो तितो वास्तबिकता भन्न वाध्य भएँ । भलिबलमा प्रथम भएर पनि अबिर लगाएन मैले । दशमीको दिन पनि टिका लगाएन । पोहोर सालसम्म आफ्नो गाउँ-ठाउँ, परिवार र साथीसँगी भन्दा टादा रहेर मनाएको दशै भन्ने गर्थे तर अहिले बुवा बिनाको पहिलो दशै जबर्जस्ती मान्न वाध्य भैरहेको छु । धनीलाई दशै गरीबलाई दशा भनेको सुनेको थिएँ । हो रहेछ नै, धनको गरीबलाई भन्दा मनको गरीबलाई दशै त दशा नै बनेर आउदो रहेछ । इश्वरको लीला भनु या प्रक्रितिको नियम, एकदिन यस संसारबाट बिलाएर जानु त छदैछ तर पनि जीवन बाँचुन्जेल पिडा पनि सहनै पर्ने रहेछ । जीवनको सकारात्मक पक्षलाई सधैं माथि नै राख्नु पर्ने रहेछ । हामी प्रक्रिती र समयको दास हौं त्यसैले जे जे आइपर्छ चुपचाप आज्ञा पालन गर्नु नै हाम्रो कर्तब्य हो । त्यही नै हाम्रो धर्म हो, जित पनि हो ।
नेटको समस्या र निकाल्न नसकिएको बेफुर्सदिले दशैको शुभकामना पहिल्यै दिन सकिन । दिलै भए पनि मेरो ब्लग भिजिट गर्ने सम्पूर्ण परिचित-अपरिचित मित्रहरुमा दशैको हार्दिक शुभकामना । असत्यको हार र सत्यानाश भएर जावस, सधैं सत्यको जित भैइराखोस् ।
Posted by Chandra Magar at 6:43:00 PM
Basanta October 2, 2009 at 6:32 AM
भाइलाई पनि शुभकामना! दशैं कार्यक्रमको रमाईलो बाँडचूड गरेकोमा धन्यबाद!
Chandra Magar December 25, 2009 at 11:14 AM
दाजुले आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्चिदिनु भएकोमा धन्यवाद ।
बुवाको तस्बिर र दुई दिने डायरी
ऊ अर्थात मेरो साथी
धेरै पछी आज
रातो भाले अर्थात 'द रेड कोङ्ची'